Bamboo Kushongedza, Bamboo Wall Cladding, Bamboo Flooring - Goridhe Bamboo
Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd. rakaumbwa muna 2011 uye ndokwenguva nzvimbo 133,400 mativi metres. Iyo fekitori iri muNanjing dhorobha, Zhangzhou guta, Fujian dunhu uko ndiko kunonyanya nzvimbo yemishenjere kukura. Iyo itsva indasitiri yemazuva ano yemishenjere uye yekushanda kambani ine chinangwa che "kusimudzira chirongwa chepasi rose chekuchengetedza nharaunda uye kudzikisa kudyiwa kwechero zviwanikwa".
Yakasimba uye yakatwasuka yemishenjere zvinhu zvemadziro facade ...
Zvakatipoteredza zvine hushamwari zvine mutsigo ...
High mukurumari pitirirwa
Yakasimba Uye Dhivha Yakavezwa Mhete Yekunze Kwekunze
Bamboo yekunamatira bhodhi ine akawanda maitiro: akasimba, akaomarara, akanyanya kuwanda, kukwirira kugadzikana, kusimba, nezvimwe zvakadaro Hunhu hunhu hunoita kuti zvinhu zvinyanyo kufarirwa mupasi. Zvinotonyanya kukosha, inyaya inochengetedza zvakatipoteredza iyo inoderedza kutema huni zvakanyanya, nekuti senge ine nguva inokura nekukurumidza uye inogona kuzvimutsiridza pachayo mushure mekucheka, zvisinei huni ine nguva yakareba kwazvo yekukura (anopfuura makore makumi maviri nemashanu), ichicheka zvine hukasha huni dzinoparadza zvakashata sango uye nharaunda. Ndokusaka sengera zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya muminda mizhinji mazuva ano.
Yakakwira Kugadzikana Slip Resistant Bamboo Kunze Decking
Bamboo ane akawanda ehupfumi uye ecological mabhenefiti uye maficha. Bamboo chirimwa chirikurumidza kukura munyika. Izvo zvine hushamwari kune zvakatipoteredza uye zvinodzikisira zvakanyanya kucheka kwehuni. REBO bamboo yekucheka bhodhi inogadzirwa kubva yakatsindirwa yemishenjere tambo uye inorapwa kuburikidza neepamusoro tembiricha, yakadzika kabhoni uye inopisa yekutsikirira tekinoroji, iyo inoita kuti bhodhi igare yakasimba, yakatwasuka, yakaoma uye yakasimba. REBO bamboo decking inoratidzirwa inotsvedza inomira pamusoro (R10), inoenderana nevana, zvipfuyo, nevamwe.